Qaraxii ugu weynaa oo ka dhacay Magaalada Beirut (SAWIRRO) | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Qaraxii ugu weynaa oo ka dhacay Magaalada Beirut (SAWIRRO)
Qaraxii ugu weynaa oo ka dhacay Magaalada Beirut (SAWIRRO)
Qaraxii ugu xooganaa ayaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay Magaalada Beirut ee Xarunta Wadanka Lubnaan, iyadoo uu ka dhashay khsaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo mid maaliyadeedba leh.
Goobjooge ayaa sheegay inuu arkay qiiq xoog leh oo ka soo baxaya meel u dhow Dekeda Magaalada Beurit, ka dibna uu xigay qaraxii ugu weynaa ee ebid ka dhaca magaaladaasi.
Goobjoogaha ayaa sheegay in qaraxa uu sameeyay daryan culus, isla-markaana ay uuro xoog lihi cirka isu shareertay, waxa uu intaa ku daray in qaraxa uu muraayadaha ka daadiyay dhismooyinka dhaadheer ee magaalada ku yaala, sidoo kalana uu burbur baaxad leh soo gaarsiiyay dhismooyinkaasi qaarkood.
Goobta uu qaraxu ka dhacay oo dacalka ku haysa Dekeda Buirut ayaa waxaa ku yaala bakhaaro lagu keydiyo walxaha qarxa, mana cadda waxa dhabta ahi ee dhaliyay qaraxan iyo nooca ay yihiinba waxyaabaha qarxa ee bakhaaradaasi ku jiray.
Wakaaladda Wararka Lubnaan ee NNA ayaa ku warantay in halka uu qaraxaasi ka dhacay ay ku yaallaan bakhaaro lagu keydiyo waxyaabaha qarxa, faah faahin intaasi dheerse kama bixin.
Major General Abbas Ibrahim, Agaasimaha Guud ee Amniga oo la hadlay Warbaahinta ayaa isna qiray in goobta uu qaraxa ka dhacay ay ku yaallaan bakhaaro lagu keydiyo walxaha qarxa.
Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in dad fara-badan ay ku dhaawacmeen qaraxaasi, isla-markaana ay jiri doonto dhimasho badan.
Telefishinka Al Mayadeen ayaa sheegay in boqolaal qof ku dhaawacmeen qaraxaasi, ayna jiraan tiro dad ah oo ku dhintay qaraxaasi, illaa iyo hadda inta laga warqabo.
Goobjooge kale ayaa sheegay inuu arkay meydadka ugu yaraan 10 qof, ha yeeshee waxaa uu ka dhawaajiyay in dhimashada ay laba laab intaasi ka badan karto.
Muuqaalo laga soo qaaday xeendaabka halka uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo ka dhashay qaraxaasi, waxayna durbaba dadka reer Lubnaan ay ku sheegeen kiisii ugu xooganaa ee ebid ka dhaca Caasimadda Beirut.